Fifanekena sy zatovo | Ny Fanorenana Valisoa: Ny Fitiavana, ny Firaisana ary ny Aterineto
Home Lalàna Fankatoavana sy zatovo
Ny olana momba ny faneken'ny firaisana ara-nofo sy ny zatovo dia sarotra.
Ny taonan'ny fandeferana amin'ny endriky ny firaisana ara-nofo dia ny 16 ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ka ny fanaovana firaisana ara-nofo eo amin'ny olon-dehibe sy ny olona ao amin'ny 16 dia heloka bevava. Ny vanim-potoanan'ny fankatoavana dia mitovy ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Ny firaisana ara-nofo (vaginal, anal) ary ny firaisana ara-nofo eo amin'ny tanora 13-15 tanora dia diso ihany koa, na dia samy manaiky izany aza ny roa tonta. Ny fiarovana azo atao dia ny hoe iray amin'ny mpiara-miasa no mino ny iray hafa ny taona 16 na mihoatra.
Mety misy fiarovana raha toa ny fanaovana firaisana ara-nofo fa tsy ny fanaovana firaisana ara-nofo na ny firaisana ara-nofo. Izany dia raha nino ilay zokiny ny tanora ny taona 16 na efa ela ary tsy mbola nampangaina ho nanao heloka bevava toy izany, na ny tsy fahampian'ny taona dia latsaky ny roa taona.
Tari-dalana avy amin'ny governemanta Scottish dia manaiky fa tsy ny tranga rehetra mikasika ny fanaovana firaisana ara-nofo ao ambanin'ny 16 dia hanana olana amin'ny ankizy, saingy ny tanora dia mety mbola mila fanampiana amin'ny fifandraisany amin'ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo sy ny fifandraisana.
Ity dia kely Video momba ny fanekena amin'ny resaka firaisana. Azo ampiasaina hanokatra dinika momba io lohahevitra lehibe io. Na dia mieritreritra aza ny olona sasany fa ny ray aman-dreny irery ihany no tokony hiadian-kevitra momba ny firaisana, dia misy andraikitra lehibe ilain'ny sekoly indrindra amin'ny fampianarana ny siansa ao ambadiky ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia. Ny ray aman-dreny dia mila mijanona tsy ho tratry ny fivoarana amin'ity sehatra ity ary miresaka matetika amin'ny zanany momba izany. Ny ray aman-dreny no maodely voalohany sy olona ambony eo amin'ny fiainan'ny zaza, na dia maditra aza izy ireo.
Ny fandeferana amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo dia zava-manahirana be indrindra, indrindra eo amin'ireo zatovo sy zatovo. Miresaka momba ny firaisana ny olon-drehetra ary maro no mifaninana amin'ny tsirairay mba hahitana hoe iza no ho voalohany hanandrana hetsika vaovao. Ny fahazoana midadasika amin'ny pôrnôgrafia amin'ny alàlan'ny finday sy tablety dia midika fa mianatra momba ny firaisana ara-nofo sy ny 'fitiavana' amin'ny tanora mpihira amin'ny resaka pôrnôgrafia ny tanora amin'ny fomba izay mety hahitana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Ny pôrnôgrafia amin'izao fotoana izao dia tsy toy ny fotony malefaka Playboy-karazana gazety taloha. Herisetra, herisetra ary herisetra ara-nofo amin'ny vehivavy na lehilahy vehivavy no fanao amin'ny 90% farafaharatsiny amin'ireo horonantsary azo maimaimpoana. Ny fijerena isan'andro an'ity fitaovana ity mandritra ny taona maro alohan'ny tena hiarahana amina tena olona dia afaka manafoana ny fahatakaran'ny zatovo, lahy na vavy, ny firaisana azo antoka, be fitiavana, ary mifanaraka.
Girls te-ho tia mijery azy, hita fa manintona ny firaisana ara-nofo ary misokatra amin'ny fitiavana. Tsy midika izany fa vonona ny hanao firaisana izy ireo. Mianatra fotsiny ny fomba hiatrehana ny vatana mifototra amin'ny firaisana izy ireo. Rehefa manao fombafomba sy manandrana fomba fijery sy fitondrantena vaovao izy ireo, dia mety ho toy ny mpihomehy ho an'ny lehilahy izy ireo. Ny fianarana momba ny fetra sy fanaovana fahadisoana dia ampahany ara-dalàna amin'ny fianarana momba ny fifandraisana. Hoy ny zatovovavy tanora 16 taona iray,
"Tsy fantatro izay tiako. Te-hotiavina fotsiny aho ... te-hanandrana izay lazain'ny olona rehetra aho ary milaza fa ataon'izy ireo. "
Nilaza koa izy fa voatosika hanao firaisana izay nanenenany avy eo. Tsy te ho afa-baraka toy ny vehivavy mahantra izy. Ankizivavy maro no mihevitra fa "tsy mahalala fomba" ny mampiato zazalahy aorian'ny nanombohany 'nifandray akaiky sy manokana'. Ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra dia mila mianatra miady hevitra sy mametraka fetra mazava momba ny zavatra mahafinaritra azy ireo.
Boys Etsy ankilany kosa dia manana angovo mahery vaika mahery vaika izay te-hizaha fiara miaraka amin'ny mpiara-miasa. Te-ho hita ho lehilahy tena izy eo imason'ireo lehilahy hafa koa izy ireo. Afaka ny ho tapa-kevitra sy tsy misy saina izy ireo amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo. Ny tsy fivadihana amin'ny vondron'olona dia mahery kokoa noho ny faniriana ny hifaneraseraka na hiaraka amin'ny tovovavy. Mianatra fotsiny izy ireo hifehezana an'io hery vaovao io amin'ny vatany. Izy ireo koa dia manjary ratsy amin'ny fanaovana fahadisoana goavana momba izay tena ankasitrahan'ny mpiara-miasa.
Noho izany raha toa ny vatana dia mety hifanakalozan-dresaka matanjaka, tsy misy porofo, ny firaisana ara-nofo dia tsy midika fa ny sainin'ny olona tsirairay dia vonona ny hanao firaisana mitovy amin'ny an'ny iray hafa. Na izany aza dia ny lahy no hery matanjaka indrindra, maro ireo vehivavy no mitarika amin'ny fanentanana ny fitondran-tena. Ao no misy ny olana mahakasika ny fanekena, manandrana manolana sy manolana.
Ny fanabeazana ny tanora momba ny fifandraisana amin'ny toe-javatra mahasarika dia ny fanalahidin'ny fanatsarana ny fandrosoana ara-pahasalamana mahasalama.